ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကြားဝင်ဖို့တိုက်တွန်း
မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ KIO တို့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းက စစ်ပွဲများအဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း PCG ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ က ဒီနေ့ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားပါတယ်။
လုံခြုံရေးယူထားသည့် KIA စစ်သားများကို တွေ့မြင်ရစဉ်။
Photo:RFA/Kyaw Myo Min
အစိုးရနဲ့ KIO တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဘို့ PCG အဖွဲ့အနေနဲ့ စားပွဲဝိုင်းပေါ်ရောက်အောင် ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ စုစုပေါင်း ၁၁ကြိ်မ်ရှိသွားခဲ့ပြီး ရလဒ်အဖြေတော့ တစုံတရာမရရှိခဲ့ဘူးလို့ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့က ဦးယွပ်ဇော်ခေါင်က ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကချင်ပြည်နယ်ကို စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်လာရောက်စဉ်ကလည်း ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ပြောဆိုခဲ့ဖူးကြာင်း ကချင်ပြည်နယ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပစ်ပယ်ထားလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့KIO အဖွဲ့ဟာ ၁၉၉၄ခုနှစ်က အစိုးရနဲ့ အပစ်အခပ်ရပ်စဲခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမူတွေဖြစ်ပြီးနောက် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့က ဦးယွပ်ဇော်ခေါင် ကို RFA အဖွဲ့သား ဦးတင်အောင်ခိုင် က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
KIO/KIA are Heroes of All pro-DEMOCRACY People of Burma. KIO/KIA only defend Kachin People and Kachin Land/State from Intruders and Babarians. KIO/KIA also fight for Democracy and Peace ,to gain United States of Burma Federation.
Jan 14, 2013 11:19 PM
D moon က KIA /KIO သို့ ပြန်လည်ချေပ ခြင်းအား လုံဝထောက်ခံပါသည် KIO သည် သူတို့ရဲ့ ကောက်ကျစ်မှု့ကြောင့် မြန်မာအစိုး၇က စစ်တိုက်ရခြင်းကို မသိခြင်ယောင်ဆောင် ပြောနေခြင်းဖြစ်သည် အခုမှ ကြောက်ဒူး တုန်နေခြင်းဖြစ်သည်
Jan 13, 2013 08:36 AM
မင်းကစစ်ခွေးမို့လို့အဲ့လိုပြောနေတာကိုငါသိတယ်။အဲ့လိုပါပဲ။နအဖဘက်ကသူတွေကဆိုက်တွေကိုလိုက်ကွန်မန့်ပေးပြီးသူတို့မှန်ကြောင်းပြောနေတာ.ရိုးနေပြီစစ်ခွေးကြီးရဲ့..မင်းလိုမျိုးကောင်ကိုသတ်ပစ်ရမှာ kia က
Jan 14, 2013 08:20 AM
နိုင်ငံရေးကို နိူင်ငံရေးနည်းနဲ့ မဖြေရှင်းသမျှ
စစ် ရဲ့ ဆိုးကျိုး ကိုပြည်သူတွေပဲခံကြရတာပါ ။
Jan 12, 2013 01:20 AM
Dear D moon,what's you means impossible?
Jan 11, 2013 09:35 PM
တပ်မတော် က လိုလိုလားလားမရှိ တာ ကြောင့်ပါ D moon:ေ၇
kio/KIA ခေါင်`ဆောင်များသည် ကိုယ်ကျိုးလိုလားသူများဖြစ်သည် ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်တဦးတည်းအုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းနေခြင်း ဖြစ်သည် နိုင်ငံေ၇း ကျွမ်းကျင်မှု့မ၇ှိလျင် တပ်မတော်၇ဲ့ တုန့်ပြန်မှု့ကို မဝေဖန်ကြပါနဲ့
Jan 13, 2013 08:57 AM